सृष्टिकर्ताको नाम छ । - Think One Week
के तपाईले सृष्टिकर्ताको ’boutमा कहिले सुन्नुभएको छ ?
के उहाँको नाम छ होला ?
तपाईलाई यो सुनेर आश्चर्य नहोला, किनकी उहाँ सृष्टिकर्ताको नाम परिचित नाम छ, त्यो हो परमेश्वर । परमेश्वरको विषयमा लिएर तपाईसँग धेरै धारणाहरु होलान् । यो व्यक्तित्व सही धारणामा आधारित छ भनेर पत्ता लगाउन कृपया यो पढ्नुहोस् ।
तपाईलाई अचम्म लाग्छ होला कि किन हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनाँै ? अब यो कसरी सम्भव छ त ? उहाँ सबैभन्दा सर्वोच्च हुनुहन्छ । यदी घामलाई हेर्दा त हाम्रो आँखा अन्धोहोला जस्तोहुन्छ भने, विचार गर्नुस् परमेश्वर जसले घामलाई नै बनाउनुभयो उहाँलाई हेर्नु झन् कति गाह्रो होला ?
परमेश्वरको उपस्थिति र महानता उहाँको सृष्टि र प्रकृतिको नियममा देख्न सकिन्छ, जुन् उहाँ आफैले बनानुभयो । यदि तपाईले परमेश्वरलाई सीधै देख्नसक्ने भए, तपाईको रोजाईको स्वतन्त्रताको महत्व नै हुने थिएन । तपाई डरैले पनि उहाँ प्रति ईमान्दार हुनुहुने थियो । उहाँलाई नदेख्दा चाहि तपाईको साँचो स्वभाव देखिन्छ ।
अझँै ठूलो योजना
यदी हामीलाई दिइएको रोजाईको स्वतन्त्रताले महान कठिन परिस्थिति पनि ल्याउने देखिन्छ । हामी सबै जसले परमेश्वरको आज्ञा उलङ्घन गर्नेर्छौँ, अन्तका दिनमा हामी उहाँको अगाडी उभिने योग्यको धार्मिक मानिस हुनेछैनौँ ।
यसलाई अझै ब्याख्या गर्दा, परमेश्वरको योजनाको अनाज्ञाकारीताले परिणाम स्वरुप दण्ड ल्याउँछ । केही मानिसहरु त झन्, सयौँ हजारौँ मानिसको मृत्यूको कारण हुन्छन् । ’emले सजाय पाउनु चाहि स्वभाविक हो । तर यहाँ सानो अनाज्ञाकारीता र ठुलो हत्यारा बीचको सिमा वा अन्तर खोई ?
हामीले पहिले नै थाहा पाइसक्यौ कि परमेश्वरलाई घुस दिन सक्दैनौँ, कालो कालो नै हो र सेतो सेतो नै हो । किनकी उहाँले स्वतन्त्र रोजाई दिनु भएकोले सबैले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्छन् र ’em त्यही चाहन्छन् पनी ।
जीवनमा गरेको सानो गलत कामले पनि तपाईलाई अशूद्व गराउँछ र सिद्व परमेश्वरको जो सामू जान रोकावट ल्याउँछ । तपाई आफैसगँ यस समस्यालाई सामधान गर्ने बाटो छैन ।
के त यदी परमेश्वर तपाईको सृष्टिकताले तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ भने ? जे भए पनि तपाई उहाँको सृष्टि हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईलाई बनाउनुभयो ।
के त यदि उहाँले यी पुरै ब्रह्माण्ड आफ्नो महानता आफ्ना सृष्टिलाई देखाउन र तपाईसम्म पुग्नलाई बनाउनु भएको हो भने ?किन परमेश्वर आफुलाई तपाई सँग बाँड्न चाहनुहुन्छ ? किनकी उहाँलाई चाहिएर होइन, तर तपाईलाई प्रेम गरेको कारणले । त्यसोभए, यो समस्याको सामाधान कसरी हुन्छ ? पछि हामी परमेश्वरको योजना भन्ने विषयमा अझै विस्तृत रुपमा हेर्नेछौँ ।
जब कसलै तपाईलाई नराम्रो गर्छ, तब तपाई त्यस मानिस सगँ एकदम रिसाउनुहुन्छ र तपाई दूई बीचको सम्बन्ध बिग्रन्छ । यदी केही चिज टुटेको छ भने त्यसको भरपाई गरिनुपर्छ । यदी नियम उलङ्घन भएको छ भने सजाय दिनु आवश्यक छ । जति ठूलो गल्ती त्यति नै ठूलो सजाय हुन्छ ।
जबदेखि हामी मानिसलाई छनावटको विषयमा स्वतन्त्रता दिइयो, हामीले सँधै गलत नै रोज्यौँ, हामी यसरी परमेश्वरको सिद्ध स्तरसम्म पुग्न सक्दैनौँ र उहाँको योजनामा कहिल्यै सुहाउदो रहदैनाँै । एकपटक वरिपरि हेर्नुहोस्, त्रृटरहित कोही देख्नुहुन्छ । कोही मानिस हेर्दा असल देखिन सक्छ तर तपाई उसको ’boutमा धेरै बुझ्दै जानुहुन्छ भने उनीहरुको त्रृटि भेट्टाउनु हुनेछ । यदी तपाई सम्बन्ध पुर्नस्थापनाको मुल्य चुकाउन सक्नुहन्न भने के त ?
आज सोच्नु पर्ने कूरा
के तपाई समस्यालाई चिन्नुहुन्छ ? परमेश्वरलाई आज्ञाकारी भएर आदर गर्ने कोही छ ? या मानिसहरु सबै आ–आफ्नै मतलबको मात्रै वास्ता राख्दैछन्
परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भएकोमा कसरी तपाई आफ्नो त्रृटि र गल्तीहरुलाई आफै ठिक गर्न सक्नुहुन्छ ?
तपाई कसरी यो ठुलो योजनाको योग्य हुनुहुन्छ ? यो दिन ५ को बाँकी सबै पाठ को ’boutमा सोच्नुहोस् र कृपया भोलि फेरी आउनुहोस् ।
दिन जारी रहन्छ 06